Oil distillation System na Best High-Quanlity Products - China NIutech Environment
Oil distillation System na Best High-Quanlity Products
Oil distillation usoro
1. ụzụ usoro ntụziaka
Mgbe ọma inyerịta okpomọkụ na ngwaahịa si mpụta akara siri esi ụlọ elu, raw mmanụ abatakwa n'ime ọkụ na ewe iwe dị ọkụ ruo achọrọ okpomọkụ. The raw mmanụ mgbe kpụ ọkụ n'ọnụ na oké ọkụ na-agafere banye distillation ụlọ elu maka esi, a fter jụrụ, na-abụghị combustible gas nwere ike nwetara na n'elu ulo-elu, mmanụ ụgbọala nta na 1 st ikuku akara, na ìhè dizel nta na 2 nd ikuku akara, oké dizel nta na 3 Rd akara na arọ mmanụ na ala nke ụlọ elu. The wax ọdịnaya raw plastic mmanụ bụ dịtụ elu; ọnyá ọhụrụ plastic mmanụ abatakwa n'ime ofu bed chernobyl maka catalytic de-ịme waksị usoro mgbe okpomọkụ inyerịta site ọkụ, na mgbe ahụ na-agafere banye distillation ụlọ elu maka esi, na onye ọ bụla mpụta akara ngwaahịa ga-nwetara. Non-combustible gas na ẹkenam n'ime ọkụ ọkụ dị ka ụdị nke manu. Mmanụ ụgbọala na dizel fractions nọgidere na-agafere banye mmanụ agakọ usoro maka alkali saa refainari na agakọ na-ike mmanụ ụgbọala na dizel nke nwere ike izute ahịa chọrọ. The arọ mmanụ na ala nke ụlọ elu a na-agafere banye arọ mmanụ tank ezitekwara mmanụ ụgbọala maka oku na uzuoku ji esi mmiri ọkụ; ndị zuru arọ mmanụ ga-blended dị ka ahịa chọrọ na mgbe ahụ na-ere dị ka mmanụ.
2. Equipment oruru na Main Equipment
The mmanụ distillation unit na-kpam kpam kewara 8 usoro dị ka na-esonụ: Steam ji esi mmiri ọkụ usoro Raw mmanụ usoro bụla mpụta mmanụ akara usoro Non-combustible gas usoro Jụrụ mmiri usoro mkpakọ usoro Oil agakọ usoro Control usoro
3. Atụmatụ na uru
1. Ọ nwere ike na-aghọta na-aga n'ihu usoro, agakọ na refainari nke raw mmanụ, jirichaa usoro ike nke zuru ezu set ngwá, iwelata mmepụta oge na-ebuli àgwà nke mmepụta, ma ugbu a, mmepụta arụmọrụ na enterprise revenue ga-mma budata. 2. Non-combustible gas na ẹkenam n'ime ọkụ ọkụ dị ka a mmanụ ụgbọala, nke ọ bụghị nanị na-ebelata emission mmetọ na-azọpụta ike nakwa dị ka lowers na-eri. 3. Atọ isi uru nke ofu bed chernobyl: (1). Ọma dozie nsogbu na adịghị ọcha ọdịnaya raw mmanụ bụ elu na deactivates mkpali ngwa ngwa. (2). Ọ nwere ike na-aghọta na mkpali imegharị ihe maka iji ma belata ọrụ na-eri ukwuu. (3). The catalytic de-ịme waksị mmetụta ike ọ bụghị naanị mma mkpụrụ ọnụego nke mmanụ ụgbọala na ìhè dizel na elu kwukwara-uru, na-mma mmanụ quality irè. 4. The zuru ezu set siri esi usoro na-akpaghị aka na-achịkwa PLC (programmable mgbagha akara) usoro, oji na-akpaghị aka ịchịkwa akwụkwọ ihe na nwere otutu ọrụ, dị ka, data collection, ngụkọta oge, ndekọ, na-ebipụta akụkọ iche-iche, mkpu na na.
Industrial na-aga n'ihu, oke throughput, welie ọgwụgwọ arụmọrụ na mmepụta ike. Nanị ala okpomọkụ pyrolysis technology, ala oriri, welie mmanụ mkpụrụ ma àgwà, hụ na ogologo okwu, na-aga n'ihu na otu ebe ọrụ mmepụta, n'ụzọ dị ịrịba ama na-agbasa ngwa * lifespan. Nanị mgbochi cocking, kwes nkesa technology, nwee ihe dokwara kpụ ọkụ n'ọnụ na? Kpamkpam pyrolized, ka enweta elu àgwà ngwaahịa. Nanị na-ekpo ọkụ akara technology, iji hụ na ọrụ dị mma na a pụrụ ịdabere. Nanị gas ọcha na fọdụrụ okpomọkụ imegharị ihe maka iji itinye n'ọrụ technology, ọcha gas ike ga-eji maka kpo oku usoro dị ka combustible gas, fọdụrụ okpomọkụ nwere ike dully tinye n'ọrụ, ghọtara onwe-ọkọnọ maka pyrolysis mmeghachi omume enweghị mmezi kpo oku iyi, n'ụzọ dị ịrịba ama na-ebelata na-agba ọsọ na-eri. Iyuzucha gas nke mmepụta akara a nwaleworo, niile emission oke ihe a chọrọ n'aka nke EU EEA nke EU na US EPA. Dum mmepụta akara ịmụta PLC nwere ọgụgụ isi akara, ịdọ aka ná ntị, mkpu na akpaaka-mgbazi ọrụ, amụma mkpuchi ọrụ n'okpuru nchekwa ọnọdụ. Low chọrọ iji manpower, Low-arụ ọrụ ike ma dị ọcha mmepụta.
Previous: n'efu plastic pyrolysis osisi Best High-Quanlity Products
Next: Industrial n'ihu scrap Taia Pyrolysis ngwá
A: The mmanụ nkọwapụta mepụtara anyị na-aga n'ihu pyrolysis mmepụta akara na-agbaso SH / T0356-1996 No 4 Light Fuel Oil. The na-emepụta mmanụ nwere elu okpomọkụ uru na ala sọlfọ ọdịnaya, ike ga-eji na-ere ọkụ, generator na raw na mmanụ maka distillation wdg The mmanụ mgbe distillation usoro nwere ike na-etinyere maka nnukwu ike-ala ọsọ dizel engine, engineering na ugbo ugbo ala / mmiri engineer na ụdị nile nke generators. Maka ngwa nke Carbon Black, biko kpọtụrụ anyị na-enweta ihe nkọwa
Oil ọcha ngwá
Na-aga n'ihu Oil sludge Pyrolysis Equipment
Na-aga n'ihu scrap Taia Pyrolysis Production Line
Industrial n'ihu scrap Taia Pyrolysis Machine
Industrial n'ihu Waste Plastic Pyrolysis Machine
Oil anụcha Plant
Oil sludge akọ Ọgwụgwọ Equipment
Pyrolysis Plastic Iji Oil
scrap Taia Pyrolysis Plant
Taia Recycling Line
Taia Iji mmanụ ụgbọala Plant
Taia Iji Oil
Imefusị Plastic Pyrolysis Production Line
Imefusị Plastic akọ Ọgwụgwọ Equipment
Imefusị Plastic Iji mmanụ ụgbọala Equipment
Waste Plastic Iji mmanụ ụgbọala Plant
Imefusị Plastic Iji Oil Equipment
Imefusị Plastic Iji Oil Plant
Imefusị Rubber Pyrolysis Equipment
Imefusị Taia Recycling Equipment
Ọhụrụ technology n'ihu Waste Taia Pyrolys ...